Ndị na-emepụta ọkụ okporo ụzọ anyanwụ - China Solar Traffic Light Factory & Suppliers
Okporo ọkụ anwụ anwụ
A na-etinyekarị ọkụ ọkụ anwụ na-acha ọkụ n'okporo ụzọ dị ize ndụ ma ọ bụ àkwà mmiri nwere ihe ize ndụ nchekwa, dị ka ramp, ọnụ ụzọ ụlọ akwụkwọ, okporo ụzọ atụgharị, akụkụ okporo ụzọ, ụzọ ndị ji ụkwụ aga, wdg.
Sistemụ ọkụ okporo ụzọ anyanwụ
Ndụ ọrụ batrị colloidal pụrụ iche nke ike anyanwụ karịrị afọ 3
Igwe ọkụ anyanwụ na-eji ndụ dị ihe dị ka afọ 15 ruo afọ 25
N'ihi na isii consecutive afọ site City Industry na Commerce Administration Bureau dị ka nkwekọrịta, na-edebe nkwa nkeji, na-aga nke ọma afọ, Jiangsu International Advisory evaluation ụlọ ọrụ gosiri AAA ọkwa kredit Enterprise, na site ISO9001-2000 mbipụta mba àgwà usoro asambodo.
Ìhè ịdọ aka ná ntị okporo ụzọ ọkụ LED
Ìhè ịdọ aka ná ntị okporo ụzọ nke anyanwụ bụ nke nwere panel anyanwụ, ngwugwu batrị, sistemụ njikwa, ihe ngosipụta LED, na okporo osisi.E jiri ya tụnyere ọkụ mgbaàmà nkịtị, ọ na-enwe mmetụta na gburugburu ebe obibi ma na-echekwa ọkụ eletrik.
Igwe ọkụ okporo ụzọ ike anyanwụ
The ojiji nke anyanwụ ike ọgbọ, ọ bụghị na-eri ot ume, doro anya mmetụta nke ike ịzọpụta, gburugburu ebe obibi nchebe, mmezi free, na-enweghị ọzọ Ịtọ cables, ukwuu na-ebelata ọrụ nke ewu na-ewu na-eri.
Ìhè nrịbama okporo ụzọ anyanwụ
Ìhè ịdọ aka ná ntị na-egbuke egbuke anyanwụ
A na-emepụta ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke nke anyanwụ site na ike anyanwụ, nke na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma, nchekwa ike yana mmezi n'efu. Ọ na-enweta aha ọma n'etiti ndị ahịa n'ihi arụmọrụ dị mma.
Igwe ọkụ ọkụ okporo ụzọ kwadoro anyanwụ
1.N'ihi na gị niile jụrụ anyị ga-aza gị n'ụzọ zuru ezu n'ime 12 awa.
2.Well-azụ na ahụmahụ mkpara na-aza gị ajuju na ire English.
3.Anyị na-enye ọrụ OEM.
4.Free imewe dị ka mkpa gị si dị.
Ìhè ịdọ aka ná ntị okporo ụzọ anwụ anwụ
1. 7-8 ndị injinia R & D dị elu na-eduzi ngwaahịa ọhụrụ ma nye ngwọta ọkachamara maka ndị ahịa niile.
2. Ụlọ ahịa ọrụ anyị nwere ọnụ ụlọ, ndị ọrụ nwere nkà iji hụ na àgwà ngwaahịa & ọnụahịa ngwaahịa.
3. Paricular nchaji & ịchaji imewe maka batrị.
4. Nhazi ahaziri ahazi, OEM, ODM ga-anabata.
Ìhè na-egbuke egbuke anyanwụ
5.Free nnọchi n'ime oge ikike mbupu n'efu!
Isi iyi ọkụ na-anabata LED ultra high brightness LED.A na-eji ihe nkedo aluminom anwụ anwụ ma ọ bụ plastik injinia (PC) mee ụlọ oriọna.The dayameta nke oriọna panel bụ 300mm na 400mm.Enwere ike ịchịkọta ahụ oriọna ahụ na-akaghị aka ma tinye ya na kwụ ọtọ.Usoro teknụzụ niile dabara na ọkọlọtọ GB14887-2011 nke ọkụ okporo ụzọ ndị mmadụ Republic of China.
Ihuenyo zuru ezu Portable anwụ okporo ụzọ
Akara ọkụ okporo ụzọ, Ọkụ okporo ụzọ na-akwado anyanwụ, Ìhè mgbaàmà okporo ụzọ, Ìhè mgbaàmà anyanwụ, Ìhè okporo ụzọ anyanwụ, Agba mgbama okporo ụzọ,